हेमेटाइट एक पत्थर हो जसको गुण अजीब छ
आध्यात्मिक विकास, रहस्यवाद
रक्तचाप, रातो लौह अयस्क, लोहेको चक्र - हनुमानाइटलाई कल गर्दैन। ढुङ्गाका गुणहरू धेरै बलियो छन्, उनीहरू पुरातन समयमा पनि मानिसजातिलाई चिनिन्थे। त्यहाँ एक किंवदंती हो जसको रूपमा रक्त खस्ने ठाउँहरु जहाँ पृथ्वी मानव रगत द्वारा पानी पकाइएको थियो। यसको नाम4शताब्दी ईसा पूर्वमा प्राप्त भएको थियो। दार्शनिक थिओफ्राससबाट। लामो समयदेखि हेमीटाइट बनाइएको ब्रोच, कंगन, मोती, रिंग र झुण्डमा राखिएको। उहाँले आफैलाई आफुलाई गाढा रातो झोलामा एक धातु चमक आकर्षित गर्नुभयो।
यस पत्थरको ठूलो भण्डार अमेरिका, ब्राजील, कजाखस्तान, इटली र स्विट्जरल्याण्डमा केन्द्रित छन्, यद्यपि रगतले बहुमूल्य मणिलाई विचार गर्दैन र लगभग सबै देशहरूमा पाइन्छ। प्रक्रिया पछि, विमान, कालो उमेर वा अपमानजनक संग हेमटाइट भ्रमित गर्न सजिलो छ। पत्थर गुणहरू असामान्य छन्, उनीहरूलाई कठोरता, बलियो धातु चमक र एक विशेषता लाल रंगको मद्दतले जागेरीबाट अलग गर्न मद्दत गर्दछ।
समय अनैतिक देखि यो मानिन्छ कि हेमेटाइट मा मार्शल मंगल को शक्ति लाई स्टोर गर्दछ, यसैले यसमा एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र हो जुन राम्रो र खराब उद्देश्य दुवै को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्राचीन मिस्र र मेसोपोटामियाियामा जादुई गुणहरूलाई ढुङ्गामा पुर्याइएको थियो, त्यसैले यो जादूगरहरू, पूजाहारीहरू, शानवनहरू पहने थियो। उहाँले आफ्नो मालिकलाई पनि खगोल आक्रमणको रक्षा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। केवल निरन्तर, बलियो भावना र आत्म-भरोसा व्यक्तिले हेमटाइटद्वारा मद्दत गरेको छ। खनिजका गुणहरू सधैं होस्ट र वरपर दुवैलाई अनुकूलन गर्दैनन्, साथै यो अझै पनि आवश्यक छ काम गर्न बाहिर काम गर्न।
यो सामान्यतया यो मानिन्छ कि रगत संग सम्बन्ध खोज्नेहरू होइन, किनकि सबै दुश्मनहरू मर्नेछन्। यदि एक व्यक्ति अक्षीय विमानमा असुरक्षित छ भने असुरक्षित, त्यसपछि उसले सजिलै हेमटाइटलाई नष्ट गर्न सक्छ। स्टोन, जसका गुणहरू राम्ररी प्रकट हुन्छन् भने, यदि चाँदीमा ट्रिम गरिएको छ भने। महिलाहरूलाई बायाँ हातको सूचकांक औंलामा रङहरू र रङहरू - दाँयामा राख्न सिफारिस गरिन्छ। जादुई प्रथाहरूको लागि, रगत को तांबे मा पठाइन्छ।
मध्य युगमा जादुई खनिजहरूको संख्यामा हेमेटाइट पत्थर समावेश गरिएको थियो । राशि को चिन्ह जो त्यो धेरै फिट बस्छ वृश्चिक छ। तर Gemini, Pisces र Virgos यसलाई टाढा रहनु पर्छ। रगतको साथमा रिंगले आत्माको नकारात्मक मनोभावबाट जादूगरको रक्षा गर्न सक्छ। सायद यसकारण जागीरहरूले रेजिमेन्टहरूमा खनिजको साथ फर्शमा सुरक्षात्मक पेन्टाग्राम लगाए।
भारतमा हेमटाइटको साहस र बुद्धिको प्रतीक हो। स्टोन, जो गुणहरू धेरै बलियो छन्, पुराना दिनहरूमा गम्भीर रक्तविस्तार, उपचारको ट्यूमर, सूजनहरू, क्रोधको बुझाईका अचानक अनुहारहरू रोक्न, तंत्रिका तंत्रको विकार, आंतला अल्सरहरूसँग मद्दत गर्न। खनिजले लोभरेसन रोक्न र आँखाको एक्जिमालाई रोक्न सक्षम छ। हेमटाइटको लागत एकदम सानो छ, यस खनिजको पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, तर नकलहरू अझै पनि सामना भइरहेको छ। वास्तविक पत्थर कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन, र जहाँ - नक्कली एक, तपाईंलाई आकार नमूना मा समान तुलना गर्न आवश्यक छ - प्राकृतिक सधैँ भारी हुनेछ। एक प्राकृतिक खून, यदि चिनि भएको चिनी पोलिसिन द्वारा आयोजित, एक विशेषता लाल पट्टी छोड्ने छ।
फाहु भाग्य र धनको भाग्य हो। र कुन अन्य दौडहरू राम्रो भाग्य आकर्षित गर्छन्?
लानाको नाम अर्थ र भाग्य
प्रेम र मायाका कामहरू, विवाह, खुशीको रून। प्रेमको स्लाइस भाग्य
रङ मा विवाह को लागि विवादास्पद। म कहिले विवाहित हुन्छु?
शर्टमा जन्माउनुहोस् र बाँच्नुहोस्
बायाँ हात क्रोका - संकेतहरू सम्झनुहोस्!
Staraya Ladoga: ठाँउहरु र यात्राहरु। Monasteries, महल र संग्रहालय। Staraya Ladoga के हेर्न?
बवासीर: Psychosomatics, गराउँछ, उपचार, सल्लाह
अपरेटिङ सिस्टम र उनको वर्गीकरण को फाइल संरचना
मानसिक मंदता - छ ... डिग्री र मानसिक मंदता को प्रकारका। मानसिक मंदता संग बच्चाहरु
रोम को सबै देवताहरूको मन्दिरमा: नाम, फोटो, वर्णन
मैक्सिम गोर्की। जीवन र रचनात्मकता को कालानुक्रमिक तालिका
Astrologer Valentina Wittrock: जीवनी, क्रियाकलाप र रोचक तथ्य
Begonia tuber - बगैचा सजावट
कसरी शिकार बन्द र जीवित सुरु गर्न? मनोवैज्ञानिक सल्लाह
कसरी प्रभावकारी घरमा प्रेस माथि पंप
"चलचित्र 43": अभिनेताहरु र फिल्म गरेको षड्यन्त्र
सफलता वा रहस्य कसरी आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्न